Somaliland: Mashruucii Biyo Ballaadhinta Caasimadda Hargaysa Oo Gabi Ahaanba Istaagay, Khilaafka Sherkadaha Gacanta Ku Haya Iyo Doorkii Xukuumadda Oo Meesha Ka Baxay. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mashruucii Biyo Ballaadhinta Caasimadda Hargaysa Oo Gabi Ahaanba Istaagay, Khilaafka Sherkadaha...
Qaadhaan Bixiyaashii Mucaawimada Ku Deeqay Oo Walaac Xoogani Soo Foodsaaray Iyo Rajadii Shacbiga Rer Hargaysa Ay Sugayeen Inay Biyo Ku Filaan Helaan Muddo 25-sanno Ah Oo Soo Gaabatay.
Mashruucii biyo ballaadhinta Caasimadda Hargaysa oo aha raja ugu weyn ee shacbiga Caasimadda Somaliland ee Hargaysa qabeen ayaa gabi ahaanba istaagay markii labaad.
Mashruucan biyo ballaadhaninta Caasimadda oo ay maalgaliyeen Midawga Yurub iyo Sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF, ayna fulinayeen hay’adda Qaramada Midoobay ee UN HABITAT, iyo Wakaalada Biyaha Hargaysa waxa qandaraaska hirgalintiisa waday laba sherkadood kuwaas oo kala ah, sherkad laga leeyahay Dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Awash iyo Sherkad laga leeyahay gudaha dalka Somaliland oo la yidhaahdo Star Group.
Wargayska Somalilandtoday oo u dhabo galay caqabadaha haysta ee mashruucii biyo ballaadhinta Hargyasa uu markii labaad isu taagay, waxaanu ku ogaanay in muran iyo is haysi xoogani u dhaxeeyo labada Sherkadood ee qandaraaska mashruuca ku guulaystay, kuwaas oo is haysigoodu sababay inay gabi ahaanba shaqii istaagto. Xukuumadda Somaliland ayaa iyana gabi ahaanba gabtay doorkeedii kaga aadanaa la socodka Mashruucan lacagta Makayiinka Doollar ahi ku baxday, iyadoo labada Sherkadood ee is hayaa waayeen habayaraate cid wax kala tidhaahda oo maamul ahaan ay hoostagaan ama dabo gasha.
Qabyada ugu weyn ee mashruucan ka hortimi ayaa timi kadib markii Xukuumaddu isbadal ay ku sameyeen Wakaalada Biyaha ay xilkii kaga qaadeen Maareyihii hore Ibraahim Siyaad oo isagu aan ka duldhaqaaqi jirin mashruucan, labada Sherkadoodna ku dabo galijiray in hawshii ay qadaraaseen sideedi u fuliyaan.
Dhinaca kale mar aanu la xidhiidhnay Xafiisyada Midawga Yurub iyo SDF, si aanu arrintan wax uga weydiino noomay suurto galin, balse waxa soo baxaaya walaaca xoogan ee dalalkii deeqaha biyo ballaadhinta Hargaysa bixiyay ka qabaan istaagida mashuurica.
Mashruuca biyo ballaadhinta Caasimadda Hargaysa ayaa qorshuhu ahaa inuu dhammaado oo laga faraxasho dhammaadka bishan aynu ku jirno ee bilawga sannadka cusub 2017-ka, waxaanu hore isu taagay 24 bishii December ee sannadkii aynu ka soo gudubnay, iyadoo dib loo bilaabay 10/1/2017, balse usbuuc kaliya kadib uu markii labaad gabi ahaanba istaagay.
Biyo ballaadhinta Hargaysa oo dadweynaha ku dhaqan Caasimaddu ay muddo 25-sanno ah sugayeen inay maruun helaan biyo ku filan, wuxuu aha dhaxalka ugu weyn ee Madaxweyne Axmed Siilaanyo uga tagaayay shacbiga rer Hargaysa, isagoo booqasho ku tagay tiraba dhawr jeer, balse hagaaskan ku yimi mashruucasi wuxuu madaw galiyay rajii rer Hargaysa ee ahayd inay biyo ku filan oo daamaha magaalada wadagaadha helaan iyo dhaxalkii ugu weynaa ee Madaxweynuhu ku macasalamayn laha shacbiga Caasimadda ku dhaqan.
Mashruucii biyo ballaadhinta Caasimadda Hargaysa